Dr Yosef ben-AA Jochannan, mpahay tantara afrikanina-amerikanina - Afrikhepri Fondation
Lizy Doctor Yosef Ben-AA Jochannan, fantatra am-pitiavana amin'ny anarana hoe "Dr. Ben" dia teraka tamin'ny 31 Desambra 1918, tamin'ny renin'i Puerto Rico ary ray etiopiana iray. Ny nanomboka tany Puerto Rico ny fampianarana ofisialy. Ny fanabeazana tany am-boalohany dia nitohy tany amin'ny Nosy Virgin sy Brezila, izay nanatrehany ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa. Dr Ben dia nahazo mari-pahaizana momba ny injeniera sivily avy amin'ny Oniversiten'i Puerto Rico ary mari-pahaizana momba ny injeniera arsitektural avy amin'ny University of Havana, Cuba. Manana mari-pahaizana doctorat amin'ny antropolojika ara-kolontsaina sy ny tantaran'ny Moorisy izy, avy amin'ny University of Havana sy ny University of Barcelona any Spain.
Dr Ben dia profesora mpanampy tao amin'ny oniversite Cornell, Ithaca, New York, nandritra ny folo taona mahery (1976-1987). Nanoratra sy namoaka boky sy taratasy 49 mahery izy, ary nanambara ny ankamaroan'ny fampahalalana nofongarina tany Ejipta.
Tamin'ny 1939, fotoana fohy taorian'ny nahazoany ny mari-pahaizana bakalorea dia nandefa azy tany Egypt ny dadan'i Ben Ben mba hianatra ny tantaran'ny olona afrikana taloha. Hatramin'ny 1941, Dr Ben dia tany Egypt farafahakeliny indroa isan-taona. Nanomboka nitarika fitsangatsanganana fanabeazana tany Egypt izy tamin'ny 1946. Rehefa nanontaniana ny antony nanombohany ny fitsangatsanganana dia namaly izy hoe: "satria tsy nisy nahalala na nandinika an'i Egypte ary ny ankamaroan'ny nino an'i Egypte. dia tsy tany Afrika. Araka ny voalazan'ny Dr. Ben, Egypt no toerana tokony hianarana ny fototry ny fiainana. Dimy taona mahery no lasa ary Dr. Ben, manam-pahaizana malaza sy Egyptologist, dia mifantoka hatrany amin'ny sivilizasiôna amin'ny lohasaha Nil.
Profesora Yosef Ben Jochannan dia Egyptologist. Rehefa avy nampianatra tao amin'ny Oniversite Cornell nandritra ny 15 taona mahery i Dr. Ben, araka ny ahafantarana azy am-pitiavana, dia nanao lahateny betsaka tamin'ny lafiny roa amin'ny Atlantika. Lohaheviny: ireo sivilizasiôna taloha tany Egypt. Ny famelabelarany dia nametrahan'ny mpianatra sy vondrona vondrom-piarahamonina mangataka azy, indrindra ireo izay manana razambe afrikana. Angamba ny fiheverana avo izay ananany ankehitriny dia avy amin'ny foto-keviny lava tsy voahozongozona fa ny sivilizasiôna taloha manamorona ny Neily dia Afrikana.
Izahay dia mitory fa ireo antsoina hoe fivavahana lehibe tandrefana dia fivavahan'ny vahoaka fotsy ary nanolotra ny maso manga, tsy marina ara-tantara, fa eken'ny rehetra eo an-tany kosa i Jesosy Kristy ho porofo fa lasa fahavalontsika ny fahavalontsika. Notsongainay ny Dr. Carter G. Woodson, izay nilaza tao amin'ny bokiny, The Mis-Education of the Negro, fa ny fandravana eropeana ny sivilizasiôna afrikanina dia natao tamin'ny alàlan'ny «famonjena fanahy». Ary nametraka ilay fanontaniana kabary izahay, mila tsy ho simba ve ny olona vao voavonjy ny fanahiny? Raha tsiahivina dia namela olon-kafa hamaritra ny zava-misy marina izahay. Ny pretra Yoruba Iyanla Vanzant dia nilaza fa voavonjy ny fanahinao rehefa manaiky ianao fa mitoetra ao aminao ny fanahin'Andriamanitra. Nilaza mazava izy hoe: "Rehefa afaka mijery ny tenanao ianao, manaiky hoe iza ary iza ianao, ary tia ny tenanao tsy misy fepetra dia voavonjy ny fanahinao. Nahazo hery ny sainao. "
"Nandritra ny 1970 taona mahery, Dr. Yosef ben-Jochannan, mpampianatra lehibe, mpikaroka, mpanoratra, mpandahateny, dia nitarika izay nanjary ezaka be mba hanasongadinana ireo fandraisana anjara Afrikana manerantany. The Major Africa Origins of Western Religions: Navoaka voalohany tamin'ny taona XNUMX, dia mitohy ho iray amin'ireo sanganasan'i Dr. Ben izay manome aingam-panahy. "Amin'ny fanasongadinana ny fitaomana afrikana sy ny fakan'ireny finoana ireny (ny fivavahana jiosy, ny kristianisma ary ny finoana silamo), dia nanambara tantara tsy hay lazaina izay aleon'ny maro manadino ny dokotera Ben." Ny tanjon'ny Dr Ben amin'ity asa ity dia ny hampiseho ny fifandraisana misy eo amin'ireo rafi-pianarana nentin-drazana afrikana nentin-drazana amin'ireo antsoina hoe Fivavahana Tandrefana ireo.
Ny angano momba ny Eksodosy sy ny Genesis ary ny fanilihana ny fiandohany afrikanina
3 vaovao avy amin'ny € 21,66
Vidio € 22,53
Nohavaozina farany tamin'ny 14 aprily 2021 2:33 maraina
sokajy AFRIKANANA SY NY FAHAMARINANA
Haiti dia manamboatra hopitaly manana ny herin'ny masoandro
Ny hazo dia mizara sakafo eo amin'izy ireo amin'ny fakany
Fandresena ny ody ratsy any Afrika
Tao te King - Bokin'ny làlana sy hatsaran-toetra